८४ वर्षीया इन्जिनियर मित्रलालले ६५ बर्षिया सुब्बा पद कि सरकारी जागिरे महिलासंग गरे बिवाह, पढ्नुहोस पुरा समाचार – News543Online
March 4, 2021 adminLeaveaComment on ८४ वर्षीया इन्जिनियर मित्रलालले ६५ बर्षिया सुब्बा पद कि सरकारी जागिरे महिलासंग गरे बिवाह, पढ्नुहोस पुरा समाचार
२०३२ सालतिर भारतको कलकत्ताबाट सिभिल इन्जिनियरिङ गरेका भट्टराईकी पहिलो श्रीमतीको १७ वर्ष अघि निधन भएको हो ।दुवै जनाको मन मिलेर एकअर्काको सहाराका लागि बिहे गरेको भए पनि सामाजिक संजालमा नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै उनले वास्तविकता बुझेर मात्र टिप्पणी गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका एक आफन्तले भने, ‘उहाँहरु एकअर्काको सहारा बन्नुभएको छ । यो जीवन उहाँहरु आफैले रोज्नुभएको हो । यसमा कसैले टाउको दुखाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’साथै दम्पत्तिले नकारात्मक टिप्पणी नगरिदिन आग्रहसमेत गरेका छन् । हरेक मानिसलाई जीवनमा सहारा चाहिन्छ । यो कुरा एक्लो जीवन बिताउनेलाई नै थाहा हुन्छ । त्यसैले यस्ता कुरालाई मजाक नबनाउन म सबैलाई आग्रह गर्छु ’ उनले भनेका छन् ।
हितेन्द्रदेव शाक्य भन्नुहुन्छ : नदीमा पानीको बहाव निकै कम भएको छ, विद्युत् सङ्कट आउन सक्छ !
मन्त्री साहको आदेशमा गहुँबाली न’ष्ट गरी मेला लगाउने तयारी, राष्ट्रपतिले उ’द्घा’टन गर्ने !
नायिका श्वेता खड्का हेलिकप्टरमा यति धेरै सहयोग लिएर, यसरी पुगिन् सिन्धुपाल्चोक ?